Ungazikhuphela njani iividiyo kwiTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 206
Njengoko sele kwaziwa, iTwitch yinethiwekhi yentlalontle okanye iqonga ledijithali elikuvumela ukuba ukonwabele ukungami xa unxulumene nayo. Enye yezona zaziwa kakhulu yile Uncedo lokujonga usasazo ngexesha lokwenyani, kunye nokusebenzisa imixholo yazo zonke iintlobo zamajelo kunye nethuba lokunxibelelana nabantu abaninzi ngaxeshanye kwiingxoxo zeqonga.
Mhlawumbi, Esinye sezikhewu eziphawulwe kakhulu kweli qonga kukuba ayikuvumeli ukuba ukhuphele umxholo wayo. Kodwa ngethamsanqa, umlingo we-Intanethi ukuvumela ukuba ukhuphele okanye ukhuphele iividiyo ezikumgangatho ophezulu usebenzisa ezinye iinkqubo, kuphela ngedilesi yekhonkco. Yonke into ekufuneka uyazi malunga noku iya kuchazwa kwinqaku elilandelayo.
Khuphela ngokukhawuleza iividiyo kwiTwitch stream
Namhlanje, iibhiliyoni zabakhupheli bevidiyo ziyafumaneka kwi-Intanethi, Zonke zinokusebenza ngokugqibeleleyo kwaye zihlala zikhululekile, Ukongeza kokungangenisi, ngokuqinisekileyo oku kuluncedo olukhulu xa kuziwa kwiinkqubo ze-intanethi.
Ukuze oku kube njalo, mhlawumbi kunjalo Olona khetho lufanelekileyo xa ufuna ukufumana ividiyo kwiqonga leTwitch. Amanyathelo okusebenzisa ezi zixhobo zinikezelwa yi-Intanethi awanzima konke konke kwaye inkqubo ayizukuthatha ngaphezulu kwemizuzu embalwa kwiscreen. Nje ukuba ubenolwazi, yonke into iya kuba lula ngokwenene.
Phakathi kwabakhupheli bevidiyo bewebhu, abakhupheli abafanele ukucetyiswa; UTwitch Leecher, sisixhobo sokukhuphela ekufuneka sifakwe kwikhompyuter Kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Esinye isixhobo esifanelwe ukugxininiswa kukukhuphela ividiyo ye-4K, isixhobo esikwi-intanethi esifikelelekayo ngale khonkco ilandelayo; https://www.4kdownload.com/es/products/product-videodownloader.
Uyisebenzisa kanjani iVidiyo enguKhuphela i4K
Kuba esi sixhobo siyifomathi yokukhuphela kwi-intanethi, kuphela ukufikelela kwiphepha okanye ngokungena kwikhonkco elishiyekileyo ngasentla, unokukhuphela ividiyo okanye usasaze ofuna ukulugcina. Ke ngoko kuthathelwa ingqalelo oko Le yeyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona ikhawulezayo yokwenza inkqubo, ke kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Yiya e 4K iwebhusayithi yevidiyo.
Ukubakho, kuya kufuneka fumana ividiyo yeTwitch ofuna ukuyikhuphela.
Ngale nto, kuya kufuneka Khuphela idilesi yekhonkco enikezwe ngumkhangeli.
Ke kwibar, ebonakala kwindawo yevidiyo ye-4K, kufuneka uncamathisele ikhonkco elikopiweyo ngasentla.
Ngaphambi kokucinezela ukukhutshwa, kufuneka oko ifomathi ikhethiwe, kunye nomgangatho wesikrini.
Ngale nto, kuya kwanela kuphela cofa kwi "khuphela".
Ilungile, ngoku kuya kufuneka ulinde imizuzu embalwa kwaye ekupheleni kwefayile Ukukhuphela kuya kwenzeka ukubona usasazo amatyeli amaninzi njengoko ufuna, Unokwabelana kwaye apho ufuna khona.
Akunakwenzeka ukukhuphela ngelixa uhambisa, xa usebenzisa olu hlobo lwefomathi ukukhuphela iividiyo kwiwebhu, ke kuyakufuneka ulinde kude kube kugqityiwe ukusasazwa ukuze ube nakho ukukhuphela.
1 Khuphela ngokukhawuleza iividiyo kwiTwitch stream
1.1 Uyisebenzisa kanjani iVidiyo enguKhuphela i4K
2 Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni
Uyigcina njani ividiyo kwiTikTok?
Ungavimba njani i-WhatsApp?